प्रदेश नं. २ को शैक्षिक स्थिती धेरै कमजोर रहेको छ ः सांसद यादव – Ankush Daily
प्रदेश नं. २ को शैक्षिक स्थिती धेरै कमजोर रहेको छ ः सांसद यादव
On ३० चैत्र २०७५, शनिबार १७:२५
वीरगंज,३० चैत्र ।
संघिय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका जिल्ला अध्यक्ष एवम सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ को शिक्षाको स्थिती अहिले पनि धेरै कमजोर देखीएको बताउनु भएको छ । वीरगंज महानगरपालीका वडा नम्बर ११ श्रीपुरमा संचालनमा आएको डिजिटल प्रविधियुक्त विदयान्जली पब्लीक स्कुलको एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गर्दै सांसद यादवले प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लाका ३ लाख बालबालीकाहरु अहिले पनि विधालय जान नसकेको जानकारी गराउनु भयो ।
शिक्षाको ज्योतीबाट बञ्चीत हुन नदिन विधालय आउन नसकेका बालबालीकाहरुलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर उनीहरुलाई पनि विधालय ल्याउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नु भयो ।
सामुदायिक विधालयहरुको शिक्षा मजबुत बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकहरुलाई राजनीति नगर्न सांसद यादवले आग्रह गर्नु भयो । यदी राजनीति नै गर्नु छ भने शिक्षक पदबाट राजिनामा दिएर खुला रुपमा राजनिती गर्न सल्लाह दिनु भयो ।
कार्यक्रममा डा. अशोक दास, समाजसेवी जसपाल सिंह, वीरगंज पब्लीक कलेजका शिक्षक युगल किशोर, बासु कर्ण, प्रेम शंकर लगायतको उपस्थीती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सालु बजाजले पेपरलेस डिजिटल फ्रविधियुक्त बुकबारे जानकारी गराएकी थिइन । कार्यत्रम विधालयका प्रधानाध्यापक हृदयानन्द तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।